Umaki: ukumaketha kwe-webinar | Martech Zone
Umaki: ukumaketha kwe-webinar
I-Livestorm: Hlela, usebenzise, ​​futhi usebenzise isu lakho le-webinar elingenayo
Uma kukhona imboni eyodwa eqhume ekukhuleni ngenxa yemikhawulo yezokuvakasha kanye nokukhiya phansi, imboni yemicimbi eku-inthanethi. Noma ngabe kuyinkomfa eku-inthanethi, ukuboniswa kokuthengisa, i-webinar, ukuqeqeshwa kwamakhasimende, inkambo eku-inthanethi, noma nje imihlangano yangaphakathi… izinkampani eziningi kuye kwadingeka zitshale imali eningi kwizisombululo zemihlangano yevidiyo. Amasu angenayo aqhutshwa ama-webinars kulezi zinsuku… kepha akulula njengoba kuzwakala. Isidingo sokuhlanganisa noma ukuxhumanisa nezinye iziteshi zokumaketha,
NgoMgqibelo, July 14, 2018 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
IBrightTALK, ebilokhu ishicilela idatha yebenchinmark benchmark kusukela ngo-2010, ihlaziye ama-webinar angaphezu kwama-14,000, ama-imeyili ayizigidi ezingama-300, okuphakelayo nokuphakanyiswa komphakathi, kanye namahora wezigidi ezi-1.2 zokuzibandakanya kusukela ngonyaka owedlule. Lo mbiko waminyaka yonke usiza abathengisi be-B2B ukuqhathanisa ukusebenza kwabo nalezo zezimboni zabo futhi babone ukuthi yimiphi imikhuba eholela empumelelweni enkulu kakhulu. Ku-2017, ababambiqhaza basebenzise isilinganiso semizuzu engama-42 bebuka i-webinar ngayinye, ukwanda ngamaphesenti angama-27 unyaka nonyaka